‘संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार प्रयासरत छ’
सिराहा करजनाहा गाउँपालिका– २ निवासी अजयशङ्कर नायक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिमको कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहनुभएका उहाँ विद्यार्थी राजनीति हुँदै २०५५ सालमा पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो । मन्त्री नायकसँग संविधान कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, समसामयिक राजनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रही गोरखापत्रका पत्रकार कुमारविवेकानन्द मिश्रले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
 नेपालको संविधान कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ?
आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने नेपाली जनताले वर्षौंदेखिको चाहना संविधान जारीसँगै पूरा भएको छ । तत्कालीन परिस्थितिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता थियो, जारी भयो । अब यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै पूर्णकार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अर्काे चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । संविधानका प्रावधानमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसके, कति कार्यान्वयनको अवस्थामा छ र क्रमसँगै कार्यान्वयन हुँदै जानेछ ।
 डेढ वर्ष बितिसक्यो अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि ?
संविधान जारी हुनेबित्तिकै सबै धारा कार्यान्वयनमा आउने अवस्था हुँदैन । समयसँगै कार्यान्वयनमा आउने हो । संविधानबमोजिम नै सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत स्थापना भएको छ । भाषा आयोग यसै संविधानबजोजिम गठन भएको हो । आउँदो २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा छौँ । हो, यो संविधानलाई मधेशवादी दलले अस्वीकार गरेकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको हो । मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार प्रयासरत छ ।
 संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशवादी दलहरू अझै आन्दोलनरत छन् नि ?
मधेशवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । त्यसका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ तर यो संशोधन विधेयकलाई मधेशवादी दलले अस्वीकार गरिरहेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सरकार गठन भएदेखि नै पहिलो प्राथमिकतामा मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याउने र संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने थियो र अहिले पनि छ । सरकारले विधेयक संसद्मा लग्यो, तराई मधेशको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन ग¥यो, घाइतेलाई उपचार, मृतकलाई शहीद तथा मृतक परिवारलाई राहत दियो । मधेशी मोर्चाकै कारण संशोधन विधेयक कमजोर बनेको छ । मोर्चाले यसलाई स्वामित्व लिनुपथ्र्याे । मोर्चाले सहयोग गरेको भए अर्कै अवस्था आउँथ्यो, परिमार्जनको अडान राखेर संशोधन विधेयक कमजोर बनाइयो । तथापि सरकार मधेशी दललाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्न चाहेको छ । दलहरू सहमति नजिक पुगिसकेका छन् । ढिलो चाँडो सहमति हुन्छ ।
 मधेशवादी दललाई सहमतिमा नल्याई स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव हुन्छ त ?
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । हो, जहाँ समस्या छ त्यहाँ कसरी गर्ने, कहिले सोच्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ । मधेशमा समस्या देखिएको छ, स्थानीय तहको सङख्या बढाउने, प्रतिनिधित्व, भाषा र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा विश्वासिलो आधार तय गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । मधेशवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जानकै लागि सरकार र सत्तारुढ दल तथा नेतृत्व क्रियाशील हुनुहुन्छ ।
 मधेशी दलको मागअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ ?
पछिल्लो अवधिमा सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर अन्य विषयमा संशोधन गरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनेर घनीभूत छलफल भइरहेको छ । सीमाङ्कन त प्रदेशका लागि हो, स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यसलाई केही असर गर्दैन । त्यसकारण सीमाङ्कनका विषयमा अधिकार सम्पन्न, स्पष्ट कार्ययोजना र दीर्घकालीन सोचका साथ एउटा आयोग गठन गरेर जाने विषयमा वार्ता भइरहेको छ । यीमध्ये कुनै विकल्पमा सहमति हुन सक्छ । प्रतिपक्षी दलले समर्थन गरेनन् भने संशोधन पारित हुन सक्दैन, यो कुरा मधेशी मोर्चाले बुझ्नुपर्छ । विश्वासिलो आधार कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सरकार प्रयासरत छ । विश्वासिलो आधार भएमा मधेशवादी दलहरू पनि निर्वाचनमा जान्छन् । पछिल्लो वार्ता र संवाद परिणाममुखीतर्फ उन्मुख छ ।
 मधेशवादी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यहाँलाई के लाग्छ ?
मधेशवादी दलका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ । निर्वाचनको विरोधी मधेशवादी दलहरू छैनन् । निर्वाचनमा जान विश्वासिलो आधार खोजिएको हो । सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत भएमा मधेशवादी दल निर्वाचनमा जान्छन् । अहिलको शक्ति सन्तुलनलाई यथावत् राखी अगाडि बढ्न मधेशवादी दल निर्वाचनमा जानुपर्छ । मोर्चाका नेतृत्व तहले दूरगामी सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी आशावादी छौँ ।
 सीमाङ्कनबाहेक अन्य विषयमा संशोधनका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ ?
मुख्य रूपमा सीमाङ्कनको मुद्दा तराई मधेशमा जोडले उठेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेकै हो तर पारित हुन संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग वार्ता संवाद भइरहेको छ । पहिलेभन्दा केही नरमपना एमालेमा आएको छ ।
संशोधन दर्ता हुनेबित्तिकै आन्दोलनमा होमिएका एमाले केही मत्थर देखिएको छ । समस्या समाधान गर्न एमाले तयार हुनुपर्छ, अवरोध खडा गर्नुहुँदैन । पछिल्लो पटक सुरु भएको छलफलले एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्दैछ । मधेशी मोर्चा सहमतिमा आए भने संशोधन प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढाउँछ । थप परिमार्जन गर्ने विषयमा सरकार लचिलो छ ।
 संविधानबमोजिम कानुन निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
संविधानबमोजिम धेरै कानुन निर्माण भइसक्यो । पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरिएका करिब ४० वटा कानुन पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसक्यो । तत्काल चाहिएको निर्वाचनसम्बन्धित कानुन टुङ्गो लागिसकेपछि स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विधेयक मस्यौदा भइसकेको छ । संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगिसकेको छ । करिब ३७÷३८ वटा विधेयक संसद्को समितिमा छलफलमा छ । मौलिक हकलगायतका कानुन मस्यौदा चरणमा छ । तीन वर्ष समयसीमा तोकिएको भए पनि त्यसअगावै कानुन निर्माण गर्न हामी प्रयासरत छौँ ।
 कानुन निर्माण सुस्त भयो कि ?
सुस्त भएको छैन, तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भन्नुस् त ? कानुन नबनेर कहाँ समस्या आयो ? कतिपय कानुनमा दलबीच फरक मत छ । राष्ट्रियसभाकै मतभारको विषयमा फरक–फरक मत छ, त्यस विषयमा सहमति हुनेबितिकै मस्यौदा आउँछ । मङ्सिरमा निर्वाचन गराउँछु भन्ने अघिल्लो सरकारले निर्वाचनको कानुनको मस्यौदा बनाएको थिएन । मस्यौदा विना नै कानुन तयार छ भनेर संसद्मा तत्कालीन मन्त्रीले भन्नुभयो । निर्वाचन सम्बन्धित कानुन त म आइसकेपछि मात्रै मस्यौदा भएको हो । संसदीय समितिमा ३७ वटा विधेयक विचाराधीन छ । छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पुग्न पाए कानुन आउँथ्यो ।
 मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने देवानी र फौजदारी संहिता पनि लामो समयदेखि विचाराधीन नै छ ?
संसदीय समितिबाट पारित भइसक्यो । अब चाँडै संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ । समितिको छलफलमा समय बढी लागेको हो अब पारित हुन्छ । देवानी र फौजदारी संहितालगायतका कानुन आएपछि धेरै कानुनी प्रक्रिया र कार्यविधिमा सुधार आउनेछ । यसले सहजता आउँछ ।
 तपाईं न्यायपरिषद् सदस्य पनि हुनुहुन्छ, न्यायपरिषद्बाटै संविधान कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको छ नि ? संवैधानिक इजलास किन गठन हुँदैन ?
परिषद्मा केही महिनाअगाडि यस विषयमा एक पटक छलफल भएको थियो, त्यसपछि भएको छैन । संविधान जारी भएपछि अस्तित्वमा आइसकेको संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएकै हो । प्रधान न्यायाधीशको मनसाय के हो भने संवैधानिक इजलासमा रहने पाँच जना न्यायाधीशको सङ्ख्या कम भयो कि ? यसलाई बढाउने हो कि ? त्यसैले रिक्त तीन जना न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकिएको छैन । यस विषयमा कानुन तथा न्याय क्षेत्रबाट व्यापक कुरा उठिरहेको छ । संवैधानिक इजलास गठनका लागि अब बस्ने परिषद् बैठकमा म कुरा राख्छु ।
 न्यायपरिषद् प्रभावकारी नभएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
न्यायपरिषद् प्रभावकारी छ । प्रभावकारी नभएको भए उच्च अदालत गठन कसरी हुन्थ्यो । परिषद्ले उच्च अदालत स्थापना ग¥यो, मुकाम तोक्यो, उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति ग¥यो । न्यायपरिषद्ले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो काम कारबाही गर्दै आइरहेको छ ।
 गम्भीर खालका उजुरीमा न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही हुँदैन, उन्मुक्ति दिइन्छ नि ?
न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा परेको उजुरीमा छानबिन हुन्छ । छानबिनबाट दोषी देखिए मात्रै कारबाही हुने हो । उजुरी पर्नेबित्तिकै न्यायाधीशलाई हटाउने कुरा हुँदैन । उजुरीमा उल्लेखित विषय सम्बन्धित कागजात प्रमाणको अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै निर्णय लिने कुरा आउँछ । अहिले पनि दुई जना परिषद् सदस्यले उजुरी छानबिन गर्दै हुनुहुन्छ । गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमाथि गहनतम अनुसन्धान भइरहेको छ । खराब आचरण वा न्यायमा विचलन आएको अवस्थामा उन्मुक्ति दिने कुरा आउँदैन । सत्यतथ्यमा आधारित उजुरीको छानबिन हुन्छ र दोषी देखिएमा कारबाही हुन्छ ।
 परिषद्ले गरेको उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्ति धेरै विवादित भयो ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
काम गर्दा सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन । नियुक्ति हुँदा देखिएको विवाद अहिले साम्य भइसकेको छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति तत्कालीन आवश्यकता थियो । न्यायपालिकालाई पङ्गु बनाएर राख्न सकिँदैन, बनाउनु हुँदैन । जुन धरातलमा हामी छौँ, सबैलाई सन्तुष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन । न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको उच्च अदालतमा अहिले न्याय सम्पादन कार्य सहज भएको छ ।
 न्याय गर्ने निकायमा विकृति, विसङ्गति बढ्दै गएको गुनासो व्यापक छ, परिषद्ले केही सोचेको छ यस विषयमा ?
अदालत विकृतिमुक्त निकायको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । न्याय गर्ने निकायमा कुनै किसिमको विकृति, विसङ्गति वा भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन तर स्वयम् सर्वाेच्च अदालतले न्यायपालिकामा विकृति छ भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले त्यस विषयमा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरिसकेको छ । अध्ययन समितिले नियन्त्रणका उपाय सुझाएको छ । न्यायपालिकालाई विकृतिमुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ, सोचिरहेका छौँ । परिषद् त्यसप्रति गम्भीर छ । चाहे ती कर्मचारी हुन् वा न्यायाधीश वा कानुन व्यावसायी हुन्, विकृतिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । विकृति, विसङ्गतिमुक्त न्यायपालिका हुनुपर्छ ।
 जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति कहिले हुन्छ ?
नेपालको संविधानले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी र कानुन व्यावसायीबाट जिल्ला न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था छ । यससम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ । नियमावली आउन बाँकी छ । नियमावली पारित भयो भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कानुन व्यावसायीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँछन् । न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लिनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश छनोट हुनेछ ।
 यो व्यवस्था त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि थियो तर कार्यान्वयन नै भएन ?
अन्तरिम संविधानको व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएन, मलाई थाहा भएन तर नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ । कानुन व्यावसायीले जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँछन् । त्यो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनेछ । त्यसपछि न्यायपालिकामा समावेशी अनुहार देख्न पाइएला । अहिले न त जिल्ला न्यायाधीशमा सीमान्तकृत वर्गको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ न त उच्च कर्मचारी वर्गमै । त्यसले गर्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा असहज भएको हो तर यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ ।